Mareykanka oo iisu diyaarinayo inuu cunaqabateyn ku soo rogo Turkiga? - BBC News Somali
Mareykanka oo iisu diyaarinayo inuu cunaqabateyn ku soo rogo Turkiga?
Dowladda Turkiga dagaalka ay ku hayso deegaannada dalka Suuriya ee ay Kurdiyiintu gacanta ku hayaan ay u joojin lahayd ayaa Mareykanka cadaadis lagu saarayaa.
Xoghayaha wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka Mark Esper wuxuu horay uga digay "in tallaabbo adag" la qaadi karo. Halka uu wasiirka Maaliyadda Mareykanka Steven Munuchin uu isuguna sheegay iney jiraan fursado cuanqabateyn cusub lagu saari karo Turkiga.
Xoghayaha gaashaandhigga Mr Esper wuxuu intaa ku daray madaxweyne Erdogan inuu qaaday "tallaabbo ay halis badan ka dhalan karto" deegaannada ay ku go'doonsanaayeen dagaallamayaasha IS-na uu halis gelinayo.
Dhinaca kale mudanayaasha labada xisbi ee dalka Mareykanka ee Dimuqraadiga iyo Jamhuuriga waxay ka arrinsanayaan sidi Turkiga cadaadis horleh loo sari lahaa.
Shacab aan yareen oo dalka Mareykanka ka soo jeeda ayaa dowladda Mareykanka ku eedeeynaya ciidamadeeda ay ka soo saartay deegaannada Turkiga uu dagaalka ku qaaday ay u sahashay inuu Turkiga dagaalkaasi qaado.
Madaxweyne Turkiga Recep Tayip Erdogan wuxuu sheegay inuu dagaalka halkiisa ka sii soconaya.
Image caption Dadka ayaa ka qaxay guryahooda ku yaalla magaalada Ras al-Ain
Pentagon wuxuu Jimcihi sheegay saldhig ay ciidamada Mareykanaka ku leeyihiin meel u dhaw deegaannada xadka uu dagaalka ka socda in hub laga soo riday dhanka Turkiga uu ku soo dhacay meel ku dhaw xerada ciidamada Mareykanaka.
Balse Tiurkiga ayaa diiday eeddaasi wuxuuna sheegay iney jirin ciidamo Mareykan oo si ula kac ah loo bartilmaameedsaday.